Maitiro ekuchengetedza yako Apple Watch | IPhone nhau
Zvino iyo watchOS 2.0 yava kusvika, inguva yakakwana yekutsanangura maitiro ekutsigira yako Apple Watch. Nekuti seyako iPhone kana iPad, Apple Watch zvakare ine marongero ehurongwa, mashandisiro uye imwe data iyo iwe yaunogona kusevha pane yako iPhone uye iyo iwe yaunogona kudzoresa gare gare. Iwo ekuchengetedza makopi eApple Watch anoitwa otomatiki muTunes kana muICloud pamwe nemakopi eiyo iPhone, asi kana iwe uchida kugadzira imwe nemaoko iwe unogona zvakare kuzviita uye isu tinotsanangura kuti tingaigadzire sei uye kuti tingaidzorere sei.
1 Izvo zvinosanganisirwa mune backup
2 Chii CHisina kubatanidzwa mune backup
3 Maitiro ekugadzira iyo backup
4 Maitiro ekudzoreredza backup paApple Watch
5 Backup zvinoshandiswa
Izvo zvinosanganisirwa mune backup
Iyo backup iyo inoponeswa pane chako kifaa inosanganisira inotevera Apple Dhata:
Zvirongwa zveSystem senge mutauro, nguva yenguva, anozivikanwa manetwork, kurira, kudedera, kupenya, nezvimwe.
Kugadzirisa zviso zvako zvekutarisa
Tsamba, Stock, Karenda uye Mamiriro ekunze
Dhata rekushandisa kwese kuiswa paApple Watch
Chii CHisina kubatanidzwa mune backup
Asi pane data, dzimwe dzadzo dzakakosha kune vazhinji, idzo dzisina kuiswa mukopi:
Zvekuita app calibration
Hutano nehutano Hwehutano, budiriro, nezvimwe (kunyangwe uri pa iPhone iwe unozviwanazve gare gare)
Playlists dzakabatana paApple Watch
Kiredhiti kadhi akachengetwa paApple Watch
Apple Tarisa Kodhi Kodhi
Maitiro ekugadzira iyo backup
Kumanikidza kumanikidza backup, zvatichanyatsoita kusunungura iyo Apple Watch kubva ku iPhone yedu. Izvi zvinoguma ne backup yezvinhu zvese zvinoratidzwa pamusoro, izvo zvinogona kudzoreredzwa pane imwechete Apple Watch kana pane imwe imwe. Asi zvakare yako Apple Watch kana ichinge yarasikirwa neiyo iPhone yako ichagadzirisa, ichirasa data rese uye kugara senge nyowani kunze kwebhokisi.
Kana tangoziva kuti izvi zvinosanganisirei, tinoenderera kutsananguro yematanho ayo. Ne iPhone yedu neApple Watch yedu padhuze uye yakabatana, tinowana iyo yekushandisa application. Kamwe mukati tinopinda menyu yekutanga, Apple Watch, uye ipapo tichaona sarudzo «Unlink Apple Watch». Iwe uchazobvunzwa yekusimbiswa uye kana iwe uri pane watchOS 2.0 iwe unofanirwa zvakare kuisa yako iCloud kiyi. Iye zvino iwe unotofanira kumirira kuti maitiro apedze, ayo anogara masekondi mashoma.
Maitiro ekudzoreredza backup paApple Watch
Isu tatova neyedu Apple Watch isina kubatana uye kuseta patsva, iine backup yakaitwa uye yakachengetwa pane yedu iPhone. Kana isu ikozvino tave kuda kudzoreredza iyo kopi kune iyo Apple Watch (kana imwe nyowani), zvese zvatinofanirwa kuita kubatanidza iyo Apple Watch kubva kuWatch application. Tinodzvanya pa «Kutanga chinongedzo», nekhamera tinotora chinovhara cheApple Watch yedu uye patakabvunzwa tinosarudza "Dzosera backup" uye tinosarudza kopi yatakaita kare. Maminetsi mashoma gare gare tichava neApple Watch yedu yakagadzirira kushandisa.
Chii chiri kushandiswa kwekuziva maitiro ekuita iyi backup? Chaizvoizvo ini ndinogona kufunga nezve maviri mamiriro uko kwaanogona kubatsira.
Tine kukundikana muApple Watch, nekuvharwa, kupunzika, kudzoreredza, nezvimwe. uye isu tinoda kuidzosera asi kwete kugadzirisa zvese zvinhu.
Tiri kuzobvisa iyi Apple Watch asi ini ndoda kuchengetedza backup kuti ndiidzorere kune imwe Apple Watch gare gare.
Unogona kuuya nemamwe mamiriro ezvinhu angave anobatsira, kana zvakadaro tingafarire kuagovera kwako mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekuchengetedza yako Apple Watch
IOS 9 Kuburitsa Nguva Pasi Pose